Dr. Thomas Maloney Joins Skyre | Wire News Services
Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » UGqirha Thomas Maloney Ujoyine iSkyre
UGqirha Thomas Maloney Ujoyine iSkyre
UGqirha Thomas Maloney, VP Technology, SKYRE
UGqirha Maloney ujoyine iqela njengeSekela likaMongameli wokuqala weTekhnoloji
Iinkqubo eziphambili zokuguqula i-hydrogen kunye ne-carbon dioxide zibambe isithembiso sokwehlisa iindleko zokuphunyezwa kwe-hydrogen kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwegesi eluhlaza. UTom uzokunceda ekuyenzeni inyani. ”
UGqr Trent Molter, u-CEO
Ugqirha Thomas Maloney ukwinkqubo yamandla e-electrochemical kunye neenkqubo zokugcina amandla ukusukela ekuqaleni kobomi bakhe. Uyincutshe yetekhnoloji yenqanaba elilawulayo ezisa ubunkokeli bokucinga kunye nangaphezulu kweminyaka engama-30 yamava kwenye indlela yamandla kunye neetekhnoloji eziphambili zemveliso yezomkhosi, i-aerospace kunye nokusetyenziswa kwezorhwebo. Njenge-SkyP's VP, uTom ukhokela kwimisebenzi yophando kunye nophuhliso ejolise kuthengiso lwexesha elifutshane, kubandakanya iitekhnoloji zokuguqula amandla e-hydrogen, ukubanjwa kwecarbon dioxide kunye nokuguqula, kunye noyilo oluphambili.
Ngelixa uGqirha Maloney ezisa amava eminyaka iiseli zepetroli kwaye iinkqubo zamandla ombane, kunye neetekhnoloji eziphambili zemveliso, ukwazisa ubunkokheli kunye nembono entsha kwiSkyre.
"Ngelixa ndingomnye umntu owaziyo iiseli zepetroli, ndikwangxamele kakhulu ukuhlanganisa ubuchwephesha bamandla kunye necandelo lezemveliso yecandelo lezemveliso ebendisebenza kulo kule minyaka ilishumi idlulileyo." Utsho uTom. “Ndifuna ukuzisa kwiimveliso zikaSkyre, ezinye zeendlela ezintsha zoyilo ezivela kwamanye amashishini. Ngolwazi olwenziweyo lokuvelisa, sinakho ukuvelisa iimveliso ezipholileyo - sineendleko zokusebenza kunye neenzuzo zokusebenza - ebesingakwazi ngaphambili. ”
Ugqirha Maloney uzihloniphile izakhono zakhe kule minyaka idlulileyo, ezobala kuluhlu olubanzi lwamava. Ngelixa kwiNkqubo yezaMandla eProton, wasebenza kuyilo nakwimveliso yokuvelisa i-hydrogen kunye neenkqubo zokubasa. Emva kwexesha e-United Technologies, wayeyiNkokeli yezobuGcisa yeqela lomntu eli-100 + elaphuhlisa isityalo samandla esisele sombane wenqanawa yaseSpain S-80. Uye emva koko wakhokela inyathelo le- $ 75M ye-USAF yokuphuhlisa kunye nokufaka itekhnoloji yokuvelisa ehamba phambili kuthengiso lwaseMelika kunye nokukhokela inkqubo ye-20m yeSebe lezoKhuselo ekufumaneni i-fuel ecocekileyo kumalahle, kwi-biomass nakwimithombo yokutya kwenkunkuma.
“UGqr. UMaloney ujoyine iSkyre ngexesha elifanelekileyo, njengoko umzi mveliso wethu ufikelele kwinqanaba eliphezulu - ufumana amatsha aphezulu kutyalo mali lwekhabhoni olungaphezulu kweedola ezingama-500 zeerandi, ngelixa izabelo zeenkampani zamandla acocekileyo zatsiba phantse i-150% kunyaka ophelileyo. ” Utshilo u-CEO we-Skyre, uGqirha Trent Molter. Umbono nobunkokheli bukaTom, kunye namava akhe amakhulu, ngaphandle kwamathandabuzo uzakudlala indima ebalulekileyo ekuqhubeni uSkyre aye kwinqanaba elilandelayo.
Inkqubo yokuguqula i-hydrogen kunye ne-carbon dioxide e-Skyre ibambe isithembiso sokwehlisa kakhulu iindleko zokuphunyezwa kwe-hydrogen kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwegesi, kwaye uGqirha Maloney wonwabile ukufaka isandla ekwenzeni eso sithembiso sibe yinyani yexesha elikufutshane- eqala ngokukhokela ukwenziwa kweSkyre's Imephu yendlela yetekhnoloji. Isigqibo sam sokujoyina i-Skyre besingathethi ngokusetyenziswa kwezorhwebo okanye ubuchwephesha bendawo, obunxulumene neengcambu zam. Kwakhona zizinto ezifana nokusetyenziswa kwetekhnoloji Ukunciphisa i-CO2 kunye notshintsho kwiikhemikhali nakwizibaseli ezinokusetyenziswa. ” Utsho uTom.
“Umhlaba ujongene nemiceli mngeni engaqhelekanga kwaye ndifuna indlela yokwenza igalelo kwizisombululo. Ngenjongo echaziweyo yokuthintela ukutshintsha kweparadigm ngendlela ihlabathi elisebenzisa ngayo amandla-iSkyre ibonakala ikwindawo engcono kunaye nawuphi na umntu oya ngakuwo onke loo macala. ”
UGqr.Maloney ufumene isidanga se-bachelor kwi-Chemical Engineering kwiYunivesithi yaseOhio State nakwiidigri zemasters kunye nezobugqirha kubuNjineli beMichiza kwiYunivesithi yaseCleveland State.
Malunga ne-SKYRE: I-SKYRE isebenzisa itekhnoloji eqinisekisiweyo, enelungelo elilodwa lomenzi we-elektroniki yokwakha iimveliso zamandla ezicocekileyo ezihambisa impumelelo kwaye zinoxanduva kwezentlalo. Iimveliso zeSKYRE zidala amathuba ezoqoqosho kwiinkampani kwaye zinegalelo kuzinzo lokusingqongileyo ngokusombulula ezinye zezona ngxaki zinzima kwaye zicinezela iingxaki kwimithombo kunye namandla.